Aya ndiwo matsva maficha eElementary OS | Kubva kuLinux
Aya ndiwo matsva maficha eElementary OS
Elementary 5.1.5 inouya nenhamba dzinoverengeka dzeAppCenter uye maFaira, asi kune zvimwewo zvakawanda zvinhu zvekutsvaga.
Kana zviri zveAppCenter, pane shanduko huru inogamuchirwa nevazhinji; vashandisi havachadi mvumo yemutungamiriri yekuisa zvigadziriso.
Izvi zvinogona kunzwika kusagadzikana, asi pachazvo zvine musoro zvakanyanya kana tichifunga kuti maneja wechikwata anofanirwa kubvumidza kuiswa kwemaapplication evashandisi vese, saka nehunyanzvi mushandisi atove nemvumo iyoyo, saka wadii kumurega agadzirise app?
Ichi ndicho chikonzero chekuchinja uye Elementary Co-Muvambi Cassidy James Blaede anozvitsanangura:
"Sezvo manejimendi akabvumidza kuisirwa uye isu tinopa tsananguro yakajeka pakati pezvikumbiro zvakasimbiswa neizvo zvisiri. Hazvina musoro kuti isu hatibvumire vashandisi kugadzirisa. Ichi chikamu chedu basa ririkuenderera rekudzora kuneta kwechokwadi, kukwidza mvumo pazvinenge zvakakodzera chete.".
Kana zviri zvekushandisa kweFiles, shanduko yakakura iri kurova; kunatsiridza kugadzikana kana uchishanda nemifananidzo. Kubva pakuburitswa uku, unogona kuteedzera pikicha uye nekuinamatira mune rakasiyana app uye Elementary OS haichazonamati nzira pfupi yemufananidzo asi kopi yacho.
Iko kunyorera kwakagadziridzwa pamwe nekumwe kuvandudzwa kudiki senge rumwe ruzivo rwunobvumidza zvirinani kubata mafaira.
Dzimwe gadziriso senge kugadziriswa kwebug kana pakagadziriswa marongero aripo mune iyi vhezheni itsva, Elementary OS 5.1.5, saka zvese zvinofanirwa kumhanya zvirinani kupfuura pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Aya ndiwo matsva maficha eElementary OS
"Inoita pfungwa zhinji"
WTF! Ndiani akashandura izvozvo, Google kana gringo uyo akadzidza Spanish mumigwagwa yeMexico? xDDD
Armando Mendoza muchengeti wemufananidzo akadaro
Pindura kuna Armando Mendoza
Oscar Xiques akadaro
Ivo vachiri vasingasanganisi erima maitiro sezviri pachena. Chinhu icho vashandisi vanga vachikumbira kwenguva yakareba uye sezviri pachena ivo havateereri kwavari.
Pindura kuna Oscar Xiques
GNU Linux-yakasununguka 5.7: iyo kernel isina blobs yatobuda